Dhageyso: Alshabaab oo dhulka la samiyay tuulo hoostagta dagmada jowhar kadib markii ay dab qabadsiiyeen+Sababta – Kismaayo24 News Agency
Dhageyso: Alshabaab oo dhulka la samiyay tuulo hoostagta dagmada jowhar kadib markii ay dab qabadsiiyeen+Sababta
by Tifaftiraha K24 7th March 2017 034
Sida ay sheegayan wararka laga helaayo tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar dableey la rumeysanyahay in ay ka tirsanyihiin alshabaab ayaa waxa ay dab qabadsiiyeen Tuulada Gaalleefta oo ka mid ah Tuulooyinka Hoos yimaada Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe.
Habeenimadii xalay ayaa la sheegay in xoogaga alshabaab ay dab qabadsiiyeen tuulada waxaana la sheegay in shabaab ay dadka horay ugu sii digeen.
Wararka waxa ay sheegayan in shabaab ay dadka deegaanka weydiisatay in ay bixiyaan waxa ay ugu yeeraan zakawaad ha yeeshee dadka deegaanka ay ka biyo diideen shabaabkuna ay ku hanjabeen in deegaankaas ay dhulka la simi doonan.
Horay dadka tuuladan ku nool waxa ay dagaal la galeen alshabaab oo ay ka saareen deegaanka waxaana hada markii dalaga uusoo baxay lasoo xiriiray shabaabka oo ku dhahay iska bixiya zakawaadka balse ay dadku diieen.
Shabaab ayaa marka dambe tuulada usoo diray ku dhawaad 300 oo askar ah kuwaasi oo baabuurta dagaalkawata waxaana dadka deegaanka iyo dhalinyaro tuulada ku nool oo hubeysnaay loo sheegay in ay tuulada ka baxaan oo aysan u babac dhigi karin xoogaga alshabaab oo aad isu soo hubeeyay dumarkii iyo caruurtii tuulada ku nooleyd waqti hore oo shalay ah ayey ka qaxeen guryahooda.
Alshabaab markii ay xalay soo galeen tuulada waxaa la sheegay in ay qaateen dhamaan wixii yaalay dukaamada iyo waxyaabaha muhiimka ah kadibna ay dab qabadsiiyeen dhamaan guryaha tuulada ku yaala.
Ka hor inta aysan ka bixin tuulada shabaabka waxaa la sheegay in halkaasi ay ka sii kaxeysteen lix kamid ah odayaasha tuulada dagan oo xiligaas halkaasi loogu tagay iyadoona aan la ogeyn meesha ay la aadeen odayaasha ay wateen oo la sheegay in ay waayeelo yihiin oo mid kamid ah uu 90 sano jir yahay.
Abaara salaadii cisho ayey xooga alshabaab ka tirsan tuulada soo galeen dabna wey qabadsiiyeen ayuu yiri qof kamid ah dadka tuulada ku nool.
Shabaab weli kama aysan hadlin dhacdadaan ay ka geesteen Tuulada Gaalleefta oo ka mid ah Tuulooyinka Hoos yimaada Magaalada Jowhar.
Halkaan ka dhageyso codka qof kamid ah dadka deegaanka
XOG: Goormee Ra’isul wasaare kheyre uu soo magacaabaya gollahiisa wasiirada?
Daawo: Eedeysanayaal lala xiriirinayo qarax ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay degmada Waabari ayaa maanta….
NISA oo loo jeediyey inay Dalka ka mamnuucdo weriyeyaal caan ah (Magacyada, Sawirrada iyo Sababta).
admin 9th January 2017 9th January 2017
Maamulka Trump ayaa hakiyey in ka badan kala badh lacagtii uu siin jiray Falastiin
Wafdi ka socda UN ka oo Kismaayo garay iyo Masuliyiin qabilay..